I-China Gachn epheleleyo ye-servo yoMntwana we-diaper ye-Baby / i-diaper yabantu abadala yokubala abavelisi boomatshini kunye nabathengisi | I-GACHN
Umatshini wokudaya i-Gachn epheleleyo ye-Servo ye-Baby diaper / umatshini wokubala we-diaper abadala
I-600 Piece / min
Amandla okufaka ::
Umatshini opheleleyo wokupakisha we-diaper yabantu abadala
Ukubala nokubeka ubungakanani Iziqwenga ezili-15-450
Ubungakanani bento enye Ubude: I-180mm-260mm, ubunzima bube 8mm-15mm
Ubungakanani bokubekwa komatshini I-L3.6m × W3.3m × H2.2m
Isixhobo samandla esiXhobo I-3Ph380Vac50HZ, inkqubo yesine yenkqubo yesine
Ukubala kunye nokuKhawulezisa ukuKhawulezisa I-600pcs / imiz
Isixhobo soMoya: uxinzelelo lomoya I-0.5MPa
Ukusetyenziswa komoya ï¼œ300L / imizuzu
Ingxolo Ingxoloï¼œ85db (A)
Ngokutshintsha i-Mitsubishi kunye ne-Yaskawa yokulawula ukunyakaza kwe-PLC kunye nenkqubo ye-servo eqhubekayo yomgama, iqinisekise ukubekwa ngokuchanekileyo nangokuzinzileyo kokubala.
Uhlalutyo lokungaphumeleli kwengqondo, xa umatshini waphula kunye nokusebenza okungaqhelekanga kwenzeka, wanika iingcebiso zokusilela kwezilumkiso
1.Sinikezela ukucwangcisa umzi mveliso wabathengi, umgca ogcweleyo kunye nokuthengwa kwezinto okanye ukukhokela
2. Ukulandela inkonzo elandelayo yemveliso: siyakukuqaphela oko imveliso ishiya umzi mveliso.
3. Emva kokuba sigqibile ukwenza iinjineli: sinceda abathengi bethu ukuba baqeqeshe abaqhubi besixhobo samthombo wamanzi mahala.
Unyango lwempazamo: isebe lenkonzo yabathengi liya kuthatha inyathelo ngokukhawuleza bakufumana nayiphi na umnxeba kwaye banikeze umlungisi oqeqeshiweyo ukukuncedazisombulule iingxaki zakho ngokukhawuleza.
Umatshini owenziwe ngokwezifiso:
Sineempawu ezintle kakhulu zokuyila kunye nokuyila. Nawuphi na umatshini owenziweyo owenziweyo unokuba
yenzelwe kwaye yenzelwe ukusebenza ngokulula kunye neendleko ezifanelekileyo, zenza ezakho
Inkqubo yofakelo isebenza kakuhle.
1- Sinikezela ngeevidiyo kunye nencwadi yemiyalelo ukubonisa inkqubo yokufakwa.
2- Sinikezela ngoqeqesho lokufakelwa simahla kumzi-mveliso wethu.
3-Singathumela itekhnoloji kumzi-mveliso womthengi ukufaka umatshini kunye nokubonelela ngenkonzo yoqeqesho.
Emva kwenkonzo yokuthengisa:
1- Inqaku elinye lomgangatho waranti kunye nenkqubo yobomi yasimahla.
Iindawo ezi-2 zasimahla ziya kunikezelwa ukuba umatshini waphulwe ngaphakathi kwexesha lewaranti.
3- Emva kwexesha lewaranti, iindawo zokuphumla ezinikezelwa ngokuxhomekeke kuhlawuliso oluthile.
Umatshini kulula ukusebenza, kunye ne-servo motor kunye ne-PLC yokuchukumisa ipaneli, enokutshintsha ubushushu bokupakisha, isantya sokupakisha kunye nobude beethishu ngokufanelekileyo. Lo matshini wamkela uyilo olukhanyayo lokudibanisa umbane, kunye nomsebenzi we-alam ye-alam yempazamo kunye nemiyalelo yokufundisa ngokhuseleko.
Ulwimi lwepaneli yesikrini sokuchukumisa lunokuba yodwa ngokukhethekileyo ngokuhambelana nomthengi.
1ear, kodwa ukulondolozwa kobomi bonke
I-3.Ixabiso eliphezulu-effiecienty, isantya sokuvelisa esizinzileyo.
I-4.Umphezulu wensimbi ongenasinyithi akukho lula ukuba ube nokuphendula ngevumba leekhemikhali.
5.Ububanzi kunye nobude bephakeji kunye ne-wipes ezimanzi zinokulungiswa njengoko kufuneka.
Ukupakisha ngokukhuphela okuqhelekileyo emgangathweni wamaplanga okanye kwipallet yamaplanga ephethe ingxowa yogutyulo evumelana nokuhamba umgama omde kwaye ikhuselwe ekungxineni, inkungu nelize kwindawo efikayo kungekho monakalo.
1. Itekhnoloji iyakwamkelwa kumzi-mveliso wethu ukuba ifunde ukuqhuba umatshini phambi kokuzisa kwiiveki ezi-2.
2.Aso, emva komatshini kumzi-mveliso wakho iingcali zethu ziya kuthunyelwa kwindibano yakho yokufaka, ukuvavanya umatshini kunye nokuqeqesha abasebenzi bakho.
3.Onye unyaka wewaranti, inkonzo yasimahla yokubonisana, iinxalenye ezifanelekileyo zomatshini ezinikezelweyo.
? Unyaka omnye yegantee yomatshini opheleleyo, yonke inkonzo yokulandela ubomi.
? Iiyure ezingama-24 inkxaso yezobugcisa nge-imeyile.
? Oochwephesha kwelilizwe ukuseta uqeqesho kunye nabasebenzi.
? Sebenzisa isiNgesi-esisebenzayo senkqubo yokusebenza.
1) .Isixhobo sinokwakhiwa okucocekileyo, sinentsebenzo ezinzileyo nenokuthenjwa, kwaye imisebenzi yazo kulula ukuyazi.
2) .Ukusebenza kwesi sixhobo kulawulwa ngumlawuli wecompyuter.
I-3) .Ixhotywe ngenkqubo ye-OMRON yeefoto zokukhangela ngokuchanekileyo.
4) .Indawo etywiniweyo kwaye inqunywe yiyo ichanekile kwaye ubushushu bamatywina bulawulwa ngokwahlukeneyo kwaye
ilungele iintlobo ezininzi zezinto zokupakisha itywina likhangeleka lilungile kwaye liqinile.
I-5) .Kunye uhlengahlengiso oluqhubekayo lwesantya ngokuguqulwa rhoqo, akukho xesha lokuphumla liya kwenzeka kwiinguqu.
6) .Ukufumene ukusebenza ngokuzenzekelayo kwezi nkqubo zilandelayo, zezi: ukusongelwa kwezinto, ukubumba,
ukusikwa kwe; ukondla; ulwelo lwamayeza (isibulala-ntsholongwane) ukutshiza kunye nokupakisha.
I-7) .Inenkqubo epheleleyo yesangqa esizenzekelayo esidibanisa imisebenzi yokubonisa umxholo weoli yolwelo,
ukutshiza, amayeza ukulawula ukuhamba kokuhamba, kunye nokuqokelela.
8) .Ukuhamba kweoli yolwelo kunokuhlengahlengiswa ngesikhokelo simahla.
9) .Xa iprinta yekhowudi ixhotyisiwe, inombolo yokuveliswa komhla inokushicilelwa ngokuzenzekelayo.
Ukuqinisekisa umgangatho woomatshini bethu bokucoca amanzi, Iinjineli zethu zinika ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha zoomatshini. Sikholelwa ukuba ukongeza kubasebenzi abanezakhono, izixhobo ziyimfuneko kwiimveliso, ezinokuvuma ukusebenza komatshini kunye nokunciphisa izinga lokungaphumeleli.
Ukusuka kuphuhliso, ukuvelisa, ukufakela, yonke indlela yokuvavanya, siqesha iingcali ukuba zenze uhlolo olungqongqo lokuqinisekisa ukuba iimveliso zinomgangatho ophezulu.
Inkxaso kubugcisa bangaphambi kokuthengisa:
1.Ukuphendula ngokugqibeleleyo nangobuchwephesha malunga nemibuzo yakho kumatshini osula amanzi.
2.Expert umntu oza kuthengisa uza kunika iingcebiso zobuchule kuwe ngokusekelwe kwiimfuno zakho ezichanekileyo zoqwalaselo loomatshini
3.Yenziwe kwaye ikucacisele ngokucacileyo xa ufika kumzi-mveliso wethu ukuba undwendwele ngaphambi kwesivumelwano.
Iiyure ezingama-4.24 I-intanethi yenkonzo ekwi-intanethi, iintsuku ezi-7 ngeveki enye inkxaso kuwe ukuba kukho nayiphi na imibuzo yezobugcisa okanye iingxaki malunga nomatshini wokuhlamba izicubu zekhaya.
Inkonzo yokuthengisa emva
1.Engineers ukufakelwa phesheya koqeqesho kunye noqeqesho, zonke iinjineli zethu zinamava okusebenza ngokusebenza phesheya
2.Ukuqinisekisa ubonelela ngokuzinzileyo kweendawo ezisetyenziswayo ngamaxabiso asezantsi
Umatshini wokucheba ozenzekelayo
Edlulileyo: I-napkin yokucoca kunye nokubalwa kwephedi ye-panty liner kunye nomatshini wokufaka impahla
Okulandelayo: Umatshini we-Mitsubishi Q170MCPU-S1 Umatshini wokukhuphela i-Baby diaper 600 pcs / min Speed ​​Speeding
Umntwana obhaptiza i-diaper abadala ubeka izixhobo ...
Umatshini opheleleyo weServo Baby diaper / ukubala okugciniweyo ...
Umatshini ozenzekelayo wochwethezo lomntwana ozenzekelayo / ukubala ...
Imveliso ye-GM-085N yoMntwana ovelisa iDapile yeLishe eyi-L3.6mÃ-W3.3 ...